Apple TV 4K ongororo: Yekukwegura Hardware inowedzerwa neakanakisa mukirasi ecosystem
Iyo Apple TV yave iripo mune imwe nzira kana imwe kubva 2007. Yekutanga Apple TV yakatanga seyenyama, kutenderera 40GB hard drive iyo yakasungirirwa kune yekare vhezheni yeTunes. Yakanga isiri nguva yakareba gare gare kuti iyo Apple TV yakashandurwa ikave yepamutemo yekutenderera bhokisi. Munguva iyoyo, iyo indasitiri yakava chock izere nematanda, mabhokisi, uye mamwe magiya-akagoneswa HDMI akafanirwa kuwana… [Verenga zvakawanda ...] nezve Apple TV 4K ongororo: Yekukwegura Hardware inowedzerwa neakanakisa mukirasi ecosystem
Mashandisiro ekushandisa Apple TV app pa iPhone ne iPad, pamwe nemazano uye matipi
Iyo Apple TV app yakagadzirirwa kudhonza yese yeTV yako munzvimbo imwechete. Imba yeApple TV + yekunyorera sevhisi, asi zvakare inopa mashowa kubva kune vamwe vanotepfenyura vanobatana sePrime TV neDisney +, pamwe nezviuru zvemafirimu ekutenga kana kurenda. Pane zvikamu zvakatemerwa kuti zvikubatsire kuwana zvimwe zvezvaunoda, zvichibva pane zvaunotarisa pamapuratifomu ese akasiyana, se… [Verenga zvakawanda ...] nezve Mashandisiro ekushandisa Apple TV app pa iPhone ne iPad, pamwe nemazano uye matipi
Basa Rekutsiva Apple TV Remote Ine Chaiko Mabhatani
Apple's Siri Remote ibasa rehunyanzvi, asi inonakidza trackpad uye minimalist dhizaini haisi yemunhu wese. Kana iwe ukada kushandisa yechinyakare kure neApple TV yako, ipapo iyo itsva $30 Function Button Remote inofanirwa kutarisa. Iri kuwanikwa izvozvi uye inotumirwa pamberi pekupera kwaChikunguru. Basa ndiyo kambani yekutanga kutengesa yechinyakare 3rd bato kure kune Apple TV. Kusiyana nezvimwe… [Verenga zvakawanda ...] nezve Basa Rekutsiva Apple TV Remote Ine Chaiko Mabhatani